Umnyhadala omfutshane ka-2016 eMadrid | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umnyhadala omfutshane ka-2016 eMadrid
Arnau Aparisi | | Abadlali, Idizayini yeMifanekiso
Kwimpelaveki ephelileyo, ii-creativos ezikwi-Intanethi bezigubungela intetho UMnyhadala omfutshane ka-2016Kwabo bangaziyo, sisiganeko kuyilo lwegraphic kunye nomzekeliso, obanjwa minyaka le eMadrid.
Isiganeko sisasazeka ngaphezu kweentsuku ezintathu apho kubaluleke kakhulu abayili kunye nemifanekiso kwihlabathi liphela Babamba iintetho kwimixholo eyahlukeneyo, kwabo baphosileyo lo msitho okanye abafuna ukwazi ngakumbi malunga nabayili abayiguqula imeko yangoku.Sizisa kule post ukhetho lwezona ntetho zibalulekileyo kulo msitho.
1.1 UCarmina okanye ipop
1.2 I-Kiki, uthando lwenziwe
1.3 Khotha umdiliya
2 Bart aalbers
3 Khulula ikhokhonathi
4 Hattie omtsha
5 Violaine kunye noJérémy
5.2 AMI eParis
5.3 IINCWADI ZOKUFUNDA ZE-AA D'AUJOURD'HUI
6 UJuan Diaz-Faes
Kubo bonke abo bangaziyo IlulwaneNdiza kukunika isishwankathelo esifutshane, iSopa yiarhente yokuyila enobuchule ekhethekileyo kwezophawu, eyilwe liqela loyilo elikhethekileyo kuphuhliso lweempawu kunye nehlabathi labo elinombono, lomlomo, elinamava, ekwakheni umhlaba weempawu. Nguye ophetheyo kwimisebenzi eyaziwayo njenge UCarmina okanye ugqabhukile, uCarmina kunye no-Amen, ngoku okanye ngekhe nakwimisebenzi engaziwa kakuhle kodwa ilunge ngokulinganayo Khotha umdiliya. Isuphu ukubonisa umsebenzi wakhe igqibe kwelokuba isixelele ngeqela.
UCarmina okanye ipop
Le projekthi yayingagcinwanga nje ngepowusta, kodwa iflegi, echaza yonke into enxulumene nefilimu ukuba ngubani, yiyo loo nto le projekthi yaphuhliswa njengokufezekiswa kophawu, kunye ulwimi lwakhe nolwahlukileyo. Izimvo ziyilelwe, hayi iiposta kunye neempawu, zonke kwilizwe elinomndilili owahlukileyo kangangokuba abanye bagqiba kwelokuba "bafake izicelo" emsebenzini wabo.
I-Kiki, uthando lwenziwe
Kwakhona kwaye njengoko kunjalo UCarmina okanye ipop kwagqitywa ekubeni kuphuhliswe ulwimi lwayo. Ke ngoko, ukuphuhlisa iprojekthi, baqala ngophuhliso lwezimvo kunye nobudlelwane phakathi kwabo ukusuka kubuchwephesha bemephu yengqondo, iikhonsepthi ezisisiseko zefilimu zezi: kushushu, kuyaphola, mhle, kuvulekile kwaye kuvule iikorale, apho Uthando, isondo kunye nepati zihambelana kwimeko yasimahla, iseti yezi zimvo zahlangana zenza, "hippie eden yemotley yasimahla", Ekususelwe kuyo bonke ubuni. Iphalethi yombala yaveliswa koko umntu ophetheyo anikela intetho abhaptizwe ngayo "Ihlobo elishushu elichithwe kwiMeditera". Kwakhona, ulwimi oluqhelekileyo kwifilimu lwaludume kangangokuba abanye bagqiba kwelokuba "balungelelanise" nomsebenzi wabo.
Le projekthi, isakwinkqubo yokwenziwa kwayo, isenokungabi yenye yezona zaziwa kakhulu, kodwa yenye yezona zisondeleyo, kulo mzekelo ubuni besazisi Ivenkile yewayini "Lama la uva"Mhlawumbi enye yezona zinto zibaluleke kakhulu malunga nale projekthi sisiqalo sayo. Umthengi weza kubo enegama nje kunye nombono, iidiliya ezimbi kunye nevenkile yewayini, iarhente igqibe kwelokutshintsha igama ibe ngumhlobo onje "Khotha umdiliya" Wanika ivenkile ubuhle bwanamhlanje, ihlala ikhula malunga nentsomi ka-Aesop "Impungutye kunye neediliya".
Bart aalbers umyili, Umzobi weRotterdam, ENetherlands, owaqala ukuyila i-punk rock rock, i-t-shirts, iiflaya kunye neengubo ze-albhamu, bekuhlala kukuthanda kwakhe ukubonisa kodwa wagqiba ekubeni afunde ukuphuhliswa kwewebhu, eya kuthi emva koko ayishiye ukuze abuyele kwinto ayithandayo, ukuzoba. Ngo-2011 wagqiba ekubeni ajoyine i-arhente yokudala UkuthengaUkusukela ngoko usebenze kuzo zonke iintlobo zabaxhasi ezinje McDonald, Ukubhukisha.com o Imfono yeMangrove.
Kwintetho yakhe uphawule malunga nomsebenzi wakhe ukuba unjani kunye nendlela yokutshintsha iadapt Uluhlu lwemibala kwiincwadi zabantwana ezindala Uyilo kuyilo kunye nesalathiso esomeleleyo awasithabathayo, enika uyilo lwakhe isitayile se-nostalgic kwimeko yanamhlanje.
Khulula ikhokhonathi Wayephethe ukujongana neenkwenkwezi kwintetho, eyona nto yayiyeyona nto imnandi kwaye ihlekisayo kuwo wonke umnyhadala, nje ukuba bangene kwigumbi bacela uluntu ukuba lukhwaze kwaye abanye bethu banikwe iibhiya. Ukungena kwakhe okuhle sele kusixelele kancinci malunga nokuba ikweyiphi le studio EMadrid, eSpain, apho basebenzele khona abathengi abanjengo: IBhunga lesiXeko saseMadrid, iLa Casa Encendida, iMpilo yaMadoda okanye isitudiyo soLuntu. Kodwa uhlala kwindawo yokusebenza ekhululekile ebonakaliswa kumgangatho ongenakulinganiswa kunye nokungakhathali yoyilo lwakhe.
Kwintetho bathethe nathi ngaphezulu ngomsebenzi wabo wendlela yokwenza umyili wobunzima kwaye basinike umzekelo abakubizayo intetho yemoto yekhebula, apho uthatha isigqibo sokulinda ulayini wezigidi zabantu ukuba unyuke intaba okanye uthathe indlela enzima kwaye uthathe isigqibo sokuyinyuka intaba uwedwa, ufunda izakhono ezahlukeneyo apha endleleni yokwenza umlilo, ukuzingela, ukuqokelela amaqunube (ukunqanda ezo zinetyhefu) okanye indlela yokusinda engqeleni, ezikwenza ukuba uzifumanise uzilungiselele ngakumbi xa ufikelela encotsheni kunabo bagqibe ekubeni balinde emgceni kwimoto yekhebula.
Imephu yeLa Latina
Hattie omtsha Ungomnye wabayili abambalwa abasasebenza ngakumbi ngesandla, kwimeko yakhe uyaziwa ngaye Ndisebenza nephepha, kwaye hayi indlela ocinga ngayo, kodwa ukudala umhlaba oyinyani ngamanqanaba amathathu, afika ebomini enkosi ngoncedo lwabafoti.
Oku kuhle Umyili weNgesi Uzalelwe eDevon, wafunda umzekeliso eBristol. Emva kwexesha wafudukela eLondon kwaye ngenxa yetalente yakhe ukwazile ukusebenzisana neenkampani ezinkulu ezinje: Kiehl's, IBM, Louis Vuitton, GAP, SONY, GQ, iWashington Post kunye neLladró phakathi kwabanye abaninzi.
Kwinkomfa yakhe wasicacisela, phakathi kwezinye izinto, ukuba iinkqubo azibukeleyo njengomntwana zichaphazele njani, Iiphuli (NgeSpanish Los Muppets) kunye UWilly Wonka, kwindlela awalibona ngayo ihlabathi, nakwimisebenzi yakhe sinokuyifumana loo ngxelo.
Uye wachaza nendlela aqala ngayo isitayile sakhe, kuba ebemncinci wazoba iimephu zezixeko awayeyakha ngeLegos. Akuba mdala, wagqiba kwelokuba aqale ukwakha izixeko kunye nezinto, kodwa kule nto ngexabiso eliphantsi nelifikelelekayo, iphepha.
Violaine kunye noJérémy
Violaine kunye noJérémySisibini esadibana kwigumbi loyilo eFrance. Kungekudala emva kokudibana Ndagqiba kwelokuba benze istudiyo sabo ngo-2009, UViolaine ujolise ngakumbi kuyilo lwegraphic kunye nomsebenzi wentengiso, ngelixa uJérémy ejongene nenxalenye yomzekeliso. Injongo yakhe ekwenzeni olu phononongo yayikukukwazi Iiprojekthi zokugubungela ezinamandla amakhulu okudalaNgubani ongazukusebenzela imali kwezi projekthi kuphela.
Le projekthi igubungela uyilo olupheleleyo lwemagazini enye, imagazini enomxholo weendaba kunxibelelwano nentengiso, ifuna ukunika abafundi bayo upapasho olunomtsalane ngakumbi nolwanamhlanje. Lo ibingomnye wemisebenzi yabo yokuqala yokuhlela xa beseka istudiyo, umbala wemagazini umbala, i ikhava kunye nemifanekiso yangaphakathi Uyilo lweefonti zokubonisa zenza lo msebenzi ungagqibelelanga, wale mihla kwaye unonophele kakhulu ekuqondeni kwayo konke.
AMI eParis Luphawu lweshishini laseFrance, elalijonge ukwenza ushicilelo kwiimveliso zalo. Kule projekthi kunomdla ukubona indlela abayenze ngayo iphethini yexesha lasentwasahlobo / lehlobo , Ukuhamba kude nobuhle obubandayo bedijithali, bagqiba kwelokuba bafeze iprojekthi ngeepensile ezinemibala ngesandla.
IINCWADI ZOKUFUNDA ZE-AA D'AUJOURD'HUI
Imagazini uL'Architecture d'Aujourd'hui
Uyilo loLwakhiwo d'Aujourd'hui lelona phephancwadi lidala lokwakha, elasekwa ngo-1930 Le Corbusier kunye noAndré Bloc. Kule khomishini bazinikele ekwenzeni kungekuphela nje uyilo lomagazini kodwa kunye nolwalathiso lobugcisa bephephancwadi. Kolu papasho, kufanelekile ukuqaqambisa indima edlalwa yi typography ukunika ukubaluleka kunye nesingqisho kupapasho ngokwalo. Kubalulekile ukuba uqaphele umsebenzi omkhulu abawenzileyo neli phephancwadi, belinika uhlobo oluthandekayo, lwangoku nolwanamhlanje, kude kakhulu kupapasho oluqhelekileyo esikuqhelileyo ukulubona kupapasho lwe-monothematic.
Imagazini L ADN
NGOKU lupapasho lwekota olujongana nemicimbi yangoku, kule meko iprojekthi ibandakanyeka kuyilo lohlelo kunye nolwalathiso lobugcisa. Upapasho kule meko luswele imifanekiso kuba kuhlala kunjalo isebenza neefoto, Kule projekthi, ukusetyenziswa kweefonti kucace gca kwaye kucocekile, ke kuyasebenza kunye nemifanekiso, enika iprojekthi I-aesthetics elula necocekileyo.
UJuan Diaz-Faes Ngenye ye abayili / imizekeliso eyona nto intsha kunye nokwaphuka komhlaba eSpain, kusebenze kunye nabathengi abakhulu abanjengolayini werestyu IiVips, kwaye mhlawumbi eyona nto aziwa kakhulu ngayo ngumsebenzi wakhe kwiipateni ezinemifanekiso, yintoni abantu abambalwa abayaziyo malunga nolwazi lwakhe kumxholo wobuchule, isihloko sobuchule sanikezelwa Universidad Complutense de Madrid.
Iprojekthi yeBombay Saphire
Kwintetho yakhe akazange athethe ngomsebenzi wakhe, wakhetha ukuthetha ngothotho lwamanqaku ukuphuhlisa ubuchule phakathi kwawo "ungabi yirobhothi", "wonwabe" okanye "ukuba uyangena ungena". Zonke zikhatshwa ziividiyo ezichazayo, ezenze ukuba inkomfa inyamezeleke ngakumbi.
Oku ibikukukhetha kwezinye zezithethi, ukuba ufuna ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nabanye abathathi-nxaxheba ungayibona apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Umnyhadala omfutshane ka-2016 eMadrid
'Njengamagqabi eKwindla' nguNeil Simone
Iifoto zasimahla zeLandscape zaseIceland